ကွေးညွှတ်ခံနိုင်မှုစမ်းသပ်ချက်မှာ ကျရှုံးသွားတဲ့ Oppo Find X – DigitalTimes.com.mm
0 Shares 948 Views
ကွေးညွှတ်ခံနိုင်မှုစမ်းသပ်ချက်မှာ ကျရှုံးသွားတဲ့ Oppo Find X
Vivo Nex ပြီးတော့ အခုတစ်ခါ JerryRigEverything ကနေထပ်ပြီးစမ်းသပ်လိုက်တာကတော့ Oppo Find X အတွက် Stress Test ပါပဲ။
တခြားဟန်းဆက်တွေနဲ့မတူတာက ဒီ Oppo Find X မှာ ရှေ့နောက်ကင်မရာတွေ တခြား Sensor တွေပါတဲ့ Pop-Up အနေနဲ့ထွက်လာတဲ့ ကင်မရာ Module ပါပဲ။ အခု သူ့ရဲ့စမ်းသပ်မှုကနေ ဖုန်းကဘယ်လောက်အကြမ်းခံနိုင်လဲဆိုတာနဲ့ ဖုန်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေက ဘယ်လောက်ထိကြာရှည်ခံနိုင်မလဲဆိုတာကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးရင် သေချာတာတစ်ခုကတော့ ဖုန်းကို ကာဗာနဲ့သုံးဖို့ရယ် ဘောင်းဘီနောက်အိပ်ကပ်ထဲ မထည့်ဖို့ပါပဲ။ Bend Test မှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ကွေးသွားပေမယ့် Camera module ကိုတော့သွားမထိတာ ကျေးဇူးတင်ရမယ့်ပုံပါ။ ကင်မရာ module သာသွားထိရင် ဖုန်းကိုလုံးဝသုံးလို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ Oppo ရော Vivo ရော Camera Module တွေက ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ထိ ခံမယ်လို့ထင်ပါသလဲ ?? ၁နှစ်လား ?? ၂နှစ်လား ??
Vivo Nex ပွီးတော့ အခုတဈခါ JerryRigEverything ကနထေပျပွီးစမျးသပျလိုကျတာကတော့ Oppo Find X အတှကျ Stress Test ပါပဲ။
တခွားဟနျးဆကျတှနေဲ့မတူတာက ဒီ Oppo Find X မှာ ရှနေ့ောကျကငျမရာတှေ တခွား Sensor တှပေါတဲ့ Pop-Up အနနေဲ့ထှကျလာတဲ့ ကငျမရာ Module ပါပဲ။ အခု သူ့ရဲ့စမျးသပျမှုကနေ ဖုနျးကဘယျလောကျအကွမျးခံနိုငျလဲဆိုတာနဲ့ ဖုနျးရဲ့အစိတျအပိုငျးတှကေ ဘယျလောကျထိကွာရှညျခံနိုငျမလဲဆိုတာကို မွငျရပါလိမျ့မယျ။
ဒီဗီဒီယိုကွညျ့ပွီးရငျ သခြောတာတဈခုကတော့ ဖုနျးကို ကာဗာနဲ့သုံးဖို့ရယျ ဘောငျးဘီနောကျအိပျကပျထဲ မထညျ့ဖို့ပါပဲ။ Bend Test မှာ လှယျလှယျကူကူ ကှေးသှားပမေယျ့ Camera module ကိုတော့သှားမထိတာ ကြေးဇူးတငျရမယျ့ပုံပါ။ ကငျမရာ module သာသှားထိရငျ ဖုနျးကိုလုံးဝသုံးလို့ရမှာမဟုတျတော့ပါဘူး။ Oppo ရော Vivo ရော Camera Module တှကေ ဘယျနှဈနှဈလောကျထိ ခံမယျလို့ထငျပါသလဲ ?? ၁နှဈလား ?? ၂နှဈလား ??
Bend TestOppo Find X
Android ကိုရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ YouTube “Dark Mode”
၆.၁ နဲ့ ၆.၅ လက်မ iPhone များရဲ့ ဓါတ်ပုံများ ထွက်ပေါ်လာ